राज्य कब्जाको बाटोमा कम्युनिस्ट सरकार
7th September 2019, 10:44 am | २१ भदौ २०७६
कृष्णप्रसाद सिटौला -
यसरी संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत बन्ने केन्द्र र प्रदेशका सरकारमा सबै ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा छ। नेपाली कांग्रेस सबैतिर प्रतिपक्षमा छ। स्थानीय स्तरमा पनि हामी दोस्रो स्थानमा छौं। सुरुमा एमाले केही अगाडि देखिएको थियो - संख्याका दृष्टिले। दुई पार्टी एक भएपछि हामीभन्दा निकै माथि पुग्यो, कम्युनिस्ट पार्टी। यसरी हेर्दा स्थानीय स्तरमा पनि हामी मुलभूत रुपमा प्रतिपक्षीमा छौं।
कांग्रेसको अबको बाटो?
हामीले संगठनलाई लिएर जनताको माझमा पुग्न आवश्यक छ। सरकारकै कारणबाट उठेका विषयबारेमा व्यापक छलफल होस्। यसबारे विचारहरु आउन्। जनस्तरमा साथीहरुले के पीडा भोग्नुपरेको छ? त्यो विचारहरु आउन्।
अब कांग्रेस पार्टी कसरी अगाडि जाने? आजको स्थिति पर्याप्त छैन। परिवर्तन हाम्रो देशले पाउने, हामी आफै परिवर्तित हुन सक्दैनौ भने यो परिवर्तित व्यवस्थालाई हामीले नेतृत्व दिन सक्दैनौं।
चारैतिरबाट प्रहार, लोकतन्त्रमाथि चारैतिरबाट प्रहार, गणतन्त्रमाथि चारैतिरबाट प्रहार, संघीयतामाथि चारैतिरबाट प्रहार, हामीले ल्याएको संवैधानिक प्रबन्ध र व्यवस्थामाथि किन भइरहेको छ?
त्यसैले हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामी भन्न चाहन्छौ। यो देश कम्युनिस्टको मात्र हैन। तपाईहरुको अहिलेको व्यवहार हेर्दा लाग्छ मानी लिउँ कम्युनिस्ट धनी भए देश धनी हुन्छ। कम्युनिस्टले सुख पाए जनताले सुख पाउँछन् भन्ने बाटोमा तपाई हिँड्न थाल्नुभएको छ। तपाई अत्यन्तै गलत बाटोमा हिड्नु थाल्नुभएको छ। जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्ने बाटो तपाईले छाड्नुभएको छ। जनताको दु:ख तपाईले बिर्सनुभएको छ। जनताको कष्ट तपाईले बिर्सनुभएको छ। जनताको संघर्ष तपाईले बिर्सनुभएको छ। हिजो जनआन्दोलनमा सँगसँगै हिड्ने बाटो तपाईले बिर्सनुभएको छ।
(भक्तपुरको बोडेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)